Författares Bokmaskin, Stockholm, 2007
ISBN: 978-91-631-7418-6 -
Buuggan la magacbaxay "Socdaalkii dheeraa" waxa qoray Sayid M Yuusuf. Wuxuuna ku saabsanyahay wiil dhallinyaro ah, oo deggenaa magaalada Berbera. Sannadkii 1988, bishii mey ayuu dagaal ka bilaabmay magaalada Burco. Dagaalkaas oo dhexmaray ciidamadii taageersanaa maamulkii Maxamed Siyaad Barre iyo ciidankii SNM. Dagaalkaasi wuxuu saamayn weyn ku yeeshay Guuleed.
Guuleed wuxuu dhuumasho kaga baxay magaaladii uu ku dhashay, ku barbaaray oo ahayd Berbera. Wuxuuna galay socdaal dheer oo aad u dhíb badnaa. Dagaalkaasi wuxuu socday muddo ku siman saddex sannadood. Balse markii dagaalkii dhammaaday 1991, sidaa kumay dhammaan dhibaatadii, ee Guuleed wuxuu gelayaa socdaal kale. Buuggani wuxuu ku egyahay "Geedigii koowaad iyo Guuleed".
Akhriste - 2008-03-30 13:19:16
ismaail - ciidanyare_2010@hotmail.com
waxaan jecelahaya inaad inaad noo sii wado sheeda oo taxane a ah